Kedu ihe bụ Usoro Mgbasa Ozi? | Martech Zone
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, anọ m na-enyere ndị ahịa Salesforce aka ịwepụta usoro esi eji usoro ikikere ha nke ọma. Ọ bụ ohere na-adọrọ mmasị na nke juru m anya. Ebe m bụ onye ọrụ mbụ nke ExactTarget, abụ m nnukwu onye nkwado nke ikike enweghị njedebe nke Salesforce na ngwaahịa ha niile dị.
Ohere a bịakwutere m site na onye mmekọ Salesforce nke nwere aha pụrụ iche maka mmejuputa, mmepe, na ijikọta nchịkọta nyiwe nke Salesforce maka ndị ahịa ha. Kemgbe ọtụtụ afọ, ha kwụsịrị ya n'ogige ahụ… mana ha amalitela ịchọpụta ọdịiche dị na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ jupụta - atụmatụ.
Salesforce na-enye imirikiti akụrụngwa yana ọfụma eji eme ihe maka atụmanya banyere etu ndị ahịa ndị ọzọ kacha mma isi jiri nyiwe ahụ. Onye mre ahịa Salesforce nwere ike ịnabata mmejuputa atumatu ọ bụla. Otú ọ dị, ọdịiche ahụ bụ na ụlọ ọrụ na-abanyekarị na njikọ aka na Salesforce na onye mmekọ na-enweghị n'ezie ikpebi ihe atụmatụ ahụ nwere ike ịbụ.
Mmejuputa Salesforce abughi ihe Atụmatụ ahia. Mmezu Salesforce nwere ike ịpụta ihe ọ bụla - site na otu ị si ere, onye ị na-eresị gị, otu ị si agwa ha okwu, otu ị ga-esi tinye ọnụ na nyiwe ụlọ ọrụ gị ndị ọzọ, yana otu ị ga-esi lee ihe ịga nke ọma. Inweta ikikere na izipu ezi uche na Salesforce abughi atumatu like o dika icho akwukwo egwu.
Atụmatụ ime ihe iji kwalite ma ree ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Akwụkwọ akụkọ Oxford Living
A marketing atụmatụ bụ atụmatụ egwuregwu egwuregwu azụmahịa maka iru mmadụ na ịtụgharị ha ka ha bụrụ ndị ahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke azụmaahịa ahụ na-enye.
Ọ bụrụ na ị zụrụ a marketing atụmatụ site n'aka onye ndụmọdụ, gịnị ka ị ga-atụ anya ka ha bunye? Ajụrụ m ndị isi ajụjụ a niile na ụlọ ọrụ ahụ, ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ azịza m nwetara… site na ideation ruo na njedebe a ga-egbu.
Zụlite usoro ịzụ ahịa bụ otu nzọụkwụ na mkpokọta gị ahia ahia:
Nchọpụta - Tupu njem ọ bụla amalite, ị ghaghị ịghọta ebe ị nọ, ihe gbara gị gburugburu, na ebe ị na-aga. Onye ọ bụla na-ere ahịa, onye ọrụ goro ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ga-arụ ọrụ site na nchọpụta ọhụụ. Na-enweghị ya, ị ghọtaghị otu esi ewepụta ngwa ahịa gị, otu esi etinye onwe gị na asọmpi ahụ, ma ọ bụ ụdị akụ dị n'aka gị.
Strategy - Ugbu a ị nwere ngwaọrụ iji zụlite usoro ntọala iji wee nweta ebumnuche ahịa gị. Usoro gị kwesịrị ịgụnye nchịkọta nke ihe mgbaru ọsọ gị, ọwa, mgbasa ozi, mkpọsa, na otu ị ga-esi atụle ihe ịga nke ọma gị. Ga-achọ nkwupụta ozi kwa afọ, elekwasị anya kwa ọnwa, na kwa ọnwa ma ọ bụ kwa izu anapụta. Nke a bụ akwụkwọ agile nke nwere ike ịgbanwe ka oge na-aga, mana ị ga-azụta nzukọ gị.
mmejuputa iwu- - Site na nghọta zuru oke nke ụlọ ọrụ gị, ọnọdụ ahịa gị, na ihe onwunwe gị, ị dịla njikere iwulite ntọala nke usoro azụmaahịa dijitalụ gị. Ọnụnọ gị dijitalụ ga-enwerịrị ngwaọrụ niile dị mkpa iji rụọ ma tụọ atụmatụ azụmaahịa gị na-abịa.
egbu - Ugbu a na ihe niile dị ebe a, ọ bụ oge iji mezuo atụmatụ ndị ị mepụtara ma tụọ mmetụta ha niile.
Optimization - Rịba ama ikuku dị jụụ nke anyị tinyere na infographic nke na-ewe usoro anyị na-eto eto ma na-ebugharị ya na Discovery ọzọ! Enweghi mmecha nke Njem Azụ ahịa Agile. Ozugbo i mechara? Usoro ahia gị, ị ga-anwale, tụọ, melite, ma gbanwee ya karịa? Oge iji bulie mmetụta ya na azụmaahịa gị.
Rịba ama na atụmatụ ahụ na-ebute mmejuputa, ogbugbu, na njikarịcha. Ọ bụrụ na ị na-emepe emepe ma ọ bụ na-azụta atụmatụ azụmaahịa sitere na ụlọ ọrụ - nke ahụ apụtaghị na ha ga-etinye usoro ahụ n'ọrụ, ma ọ bụ mezuo ya.
Azụmaahịa Mgbasa Ozi Nlereanya: Fintech
Anyị nwere webinar mara mma nke na-abịa na Salesforce, Omume kachasị mma na inmepụta Ahụmịhe Ndị Ahịa na Servicelọ Ọrụ Ọrụ Ego, ebe anyi na aturu atumatu uzo ahia ahia na ulo oru ndi oru ego. The webinar bịara mgbe m mere ụfọdụ ala-agbasa nnyocha na ụlọ ọrụ na dijitalụ nkewa nke na-eme n'etiti ụlọ ọrụ ego na ndị ahịa ha.
Na ịmepụta atụmatụ ịzụ ahịa, anyị matara:
Ndị ndị ahịa ha bụ - site na mmuta ego ha, na ndu ha, na ahu ike ha, na mmadu ha.
Ebe ahia ha gbara - etu otu nzukọ ha siri tozuo ike ha na ha. Hà maara ndị ha bụ, ma ha na-akụziri ha ma ọ bụ na ha akụzighị, ma ndị ahịa ha eritela uru n'ezie site n'ịmụta ihe n'aka ha, na ma onye ahịa ọ ruru aka n'onwe ya?
Olee otu nzukọ ahụ si etinye aka - ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ jụrụ maka nzaghachi, ha nwere ike ịtụle ajụjụ ndị a dị n'elu, ha nwere akụ iji kụziere ma kwadebe ndị ahịa ha, ma njem ahụ ọ bụ nke ahaziri iche n'ezie?
Ndi nzukọ a nwere akụ - Nnyocha anyị gosipụtara isiokwu iri na abụọ ndị ahịa ha na-enyocha mgbe niile n'ịntanetị - site na njikwa kredit, njikwa akụnụba, atụmatụ ala, na atụmatụ ezumike nka. Ahịa na-achọ N'onwe Gị ngwá ọrụ iji nyere ha aka amata, atụmatụ, na mezuo ego ha… na oru ha na ha na-arụ ọrụ na kwesịrị ha niile (ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na-arụtụ ha a oké onye).
Ndi a hụrụ nzukọ ahụ n'oge ọkwa ọ bụla - site na nchọpụta nsogbu, nyocha nyocha, ihe achọrọ na nhọrọ nzukọ ego, nzukọ ahụ nwere ike iru ọkwa ọ bụla na njem onye zụrụ ahịa? Ha nwere ngwaọrụ na akụrụngwa iji nyere aka mee ka nchọpụta nke onye zụrụ ahịa wee kwado ha aka?
Enwere ike iru nzukọ ahụ site na ndị na-ajụ ase - edemede abughi soso. N’ezie, ụfọdụ ndị anaghịdị ewepụta oge wee gụọ akwụkwọ. Ndi nzukọ a na-eji ederede, onyonyo, odiyo, na vidiyo iji ruo atụmanya ha ma ọ bụ ndị ahịa ebe ha nọ ahọrọ?
Ozugbo emejuputara, olee otú a ga-atụle ihe ịga nke ọma na usoro ahia gi? Tupu ị mejuputa atumatu, a ga-atụle ikike ịtụle ya ka ị mara na ọ na-arụ ọrụ. Ogologo oge ole ka ị ga-eche tupu ị chọpụta otu ọ ga-esi mee nke ọma? Kedu oge ị ga - eji bulie mkpọsa gị? Kedu oge ị ga-agbakọ ha ma ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ?
Ọ bụrụ n ’ị ga-azacha ajụjụ niile ndị a, mgbe ahụ ị ga - enwe ihe siri ike marketing atụmatụ. Usoro ahia ga - enyere gị aka ikpughe, ịchọpụta, na ịhazi atụmatụ ịchọrọ ngwa ọrụ ma ọ bụ akụ.
Site na fintech ihe atụ dị n'elu, ụlọ ọrụ gị nwere ike ịchọpụta na saịtị ahụ na-efu maka mgbakọ ụlọ mgbarakwa ụlọ ka ị wee nwee atụmatụ ị wulite otu. Nke ahụ apụtaghị na atụmatụ ahụ na-akọwa ihe mgbako dị ka, otu ị ga - esi zụlite ya, ebe a ga - anabata ya, ma ọ bụ otu ị ga - esi kwalite ya… ndị a bụ usoro mkpọsa niile a ga - eme ụzọ. Usoro a bu iru ihe eji achoputa ndi gha acho iru ndi ahia. Mmejuputa na ogbugbu na-abịa mgbe e mesịrị.
Atụmatụ bụ oghere dị n'etiti mkpa na mkpochapụ
Ka mụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga ahịa na Salesforce, anyị na-akụpụ ya n'ogige ahụ gbasara nkwa ndị a. Salesforce enyerela ndị ahịa aka ịmata mkpa ọ dị maka teknụzụ iji nyere ha aka na ahịa na ahịa ha.
Onye ọrụ Salesforce dị n'ebe ahụ iji nyere ha aka itinye usoro maka usoro na atụmatụ ha tụrụ anya ime. Ma m nọ n'etiti abụọ ịmata ọdịiche na-arụ ọrụ n'etiti nyiwe, ibe, na ndị ahịa ịzụlite plan iji ruo atụmanya ha na ndị ahịa ha. Mgbe enwere nkwekọrịta n'etiti anyị niile, onye ahịa Salesforce na-abata ma na-emejuputa azịza ya, mgbe ahụ onye ahịa ahụ na-eme atụmatụ ahụ.
Ma, n'ezie, ka anyị na-atụpụta nsonaazụ ya, anyị kwesịrị ịhazigharị atụmatụ ahụ site n'oge ruo n'oge. Na ntọala ụlọ ọrụ, nke ahụ nwere ike were ọtụtụ ọnwa iji mezuo.
Tags: CRMteknụzụ egomarketingmarketing atụmatụ